Kun hiriraa guyaa 3 duraa ti sababa network yaroon gad dhifamu dhabee – Kichuu
Kun hiriraa guyaa 3 duraa ti sababa network yaroon gad dhifamu dhabee
Essumaa haacaaluu kallatiin dhukasee kaan ajjessee kunoo akkumaa video OMN irraa mullatuu kanaaa fakkataa nafxanyaan afaan oromoo dubbatuu garuu diddee cubbuu ummataa oromoo irratii ofaa jirtii haacaaluu ajjesaanii matii salphisanii oromoo kanan maal jettuu
Kun hiriraa guyaa 3 duraa ti sababa network yaroon gad dhifamu dhabeee
Obsa Abdi Ebrahim
Dhugaa dhoksuu dandeenyu!
Reeffa Hacaaluu kan karaa keellaa naanneesse GGAO geesse Galaanaa Gaaromsaa fi koree reeffa fuudhee Amboon geessu ture malee Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohammed humnaan hatanii hin deebifne.
Dubbiin akkana. reeffi hospitaala Hacaaluu Phawuloosi bahee gara Amboo qajeele. Akkuma Phaawuloosi bahee naannoo Gulallee bakka Fiinansi jedhamtu (kilomeetira 1 erga deemee) Taakkalaan Galaanaa Gaaromsaati bilbilee bulchiinsa magaalaa finfinneetti reeffa fidii koottu jedheen.
Baasi hunda danda’een ergaa fidii koottu jedhee erga walii galanii of duuba deebi’uudha yoo yaalan ummanni akka malee karaa cufee miira keessa seenee sababii socho’aa jiruuf mijaachuu dide garuma lixaatti qajeelan. Ammas bilbilanii Taakkalaa fi Shimallis erga fiduu dandeenyee wingeet bakka jedhamutti dhufnaa nu eega jennan Galaanan ummanni miira keessa seenee jira hin dhufiina waanti biroo nu muudachuu malaa jedheen. Gidduu kanatti Jawaar fuulduraan karaa Wingeet itti dhufee reeffa duuka gara Burraayyuutti imala eegalan.
Reeffis uummannis deemee gaafa Bulchiisan Magaalaa Burayyuu karra fuuldura gaafuma konkolaatan Jawaar gahu dhukaasni guddaa eegalame. Konkolaata Jawaar dhaabani Gaardonnis keesaaa harca’anii,ummanni hedduun walirratti kukkufe. Gidduu kanatti reeffa fuudhanii kutan. Jawaarfaa Amma bakka Dirree Sololi’aa jedhamutti fiigani reeffa dhaqqabuu dadhabnaan of duuba gara finfinneetti deebi’an. Lubbui isaanituu waaqatu baase reeffa maal humnaan hatanii deebisu?
Achii reeffi karaa keelaa finfinneetti deebi’aa jira jennaan asiin gara Galma Giddu Galaa bakka reeffii jiru dhaqanii achitti qabaman.
Dhugaan jirtu kana. Akkatti reeffi finfinneetti deebi’ee kan beeku Galaanaa Gaaroomsaa maaf callise? eenyuu akka deebisiise silaa ni beeka dirqamaanis ta’u fedhiin kan reeffaa finfinnee geesse silaa isa maaf gaafa Jawaarfaatu reeffaa hatee finfinnee geesse jedhan callisa?
Yoo dirqamaan deebise eenyu akka isa dirqisiise maaf adda baase dubbanne. Yoo maariidhan deebisan ammoo maaf holola mootummaa kana cabsine?
Galaanaa yakka qaba osoo taani garuu haqni jiru kana jechuudhumaafi.
Kuni haqaa dhoksuu dandeenyu waan dhufu dandeenyee keessummeessina malee!
Ilaali Oromoo Haacaaluu Ajjeessuun hanqaate Amboo dhaquun Durbii Hacaaluu warranni Abiy Akkanatti Mormaa isaa irra rukuutuun ajjesee Gochaa gara jabiinaa. Ilmaan Oromoo hardha lubbuun kennaa hardha gatii dhabe lubbuu shimbira hanqate.
Live from Washington DC Protest July 16 2020
Maatiin Abiyot maal jetti . Afaan amaaraa hin dubbatinaa, afaan qomcee faana tokko laga cehuu hin dandeeny
Ijoollee Horro Kundii
ONN LIVE : Marii oolmaa Oromiyaa Adooleessa 14/2020